KALSAN: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 ayaa shaaca ka qaaday - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh KELIYA: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 ayaa kashifaya
KELIYA: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 ayaa kashifaya
MondoCon ayaa noo dhow. Behemoth-ka dabaaldegayaasha aruurinta daabacaadaha ayaa hoos u dhacaya Nofeembar 4 iyo 5 magaalada Austin, Texas ee Austin Mareykan-Mareykan ah waana adag tahay inaan sugno. Labadii toddobaad ee la soo dhaafey, waxaan leenahay waxoogaa wanaag ah oo safka cajiibka ah ee farshaxan yahannada ay la imaanayaan. Muujin kastaa wuxuu la mid ahaa kii ugu dambeeyay. Shandadahayagu mar horeba way gariirayaan iyaga oo ka cabsanaya tirada waxyaalaha aan durba u baahanay inaan ku darno ururintayada.
Sannadkan, halyeeyga Drew Struzan ayaa ka soo qayb geli doona liiska farshaxanada horeyba u fiicnaa anaguna iskama celin karno, niman yahow. Struzan wuxuu mas'uul ka yahay noocyada kala duwan ee sawirada dabaaldega ah sanadihii la soo dhaafay, laga bilaabo Star Wars ilaa Indiana Jones ilaa Blade Runner (wax yar ka magacow) ninkani waa halyeey socda. Kaqeyb galkiisa MondoCon ee sanadkan waa mid toos ah.
Kuma sii farxi karno in nala siiyo fursad aan si gaar ah ula wadaagno labo ka mid ah daabacadaha uu Struzan la imaan doono. Dabcan, labadoodaba gabi ahaanba waa qiiroonayaan idinkuna waxaad dooneysaan inaad lahaataan labada lamaane, dhab ahaan waan sameynaa. Dhab ahaan, bahalka Frankenstein iyo caruusadiisa waligood sifiican ugama muuqan.
MondoCon waa dabbaaldeg wax kasta oo Mondo jecel yahay, oo ay ku jiraan filimo, farshaxan, majaajillo, muusiko, alaabada carruurtu ku ciyaarto iyo cuntooyin. Waa isbuuc dhammaad ah oo ay taageerayaashu maskaxda ku hayaan, oo ay ku jiraan fanaaniin cajaa'ib leh iyo hal abuurayaal ka kala yimid agagaaraha adduunka, darbiyada, baaritaanka, gawaarida cuntada, dhibcaha nool iyo dhacdooyinka isdhexgalka.
“MondoCon waa xaflad lagu xuso wax kasta oo Mondo jecel yahay, oo ay kujiraan filimo, farshaxan, majaajillo, muusig, alaabta carruurtu ku ciyaarto, iyo cunno, waana ku faraxsanahay inaan la wadaagno jacaylka aan u qabno magaalada Austin anagoo ku qabanayna shirka midig bartamaha magaalada Austin American-Statesman . ” Maamulaha Gallery iyo Dhacdooyinka 'Said Mondo', David Rancatore. Goobtu waxay ahayd hoyga madbacadaha daabacaada wargayska waxayna u tahay meel aad u wanaagsan dhamaan fanaaniinta cajiibka ah, soo bandhigayaasha, ka soo qayb galayaasha, iyo goleyaasha usbuucan. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku qabanno baaritaankayaga fiidkii Alamo Drafthouse oo ku taal Koonfurta Lamar, oo ah gurigii Mondo sanado badan, iyo taageerayaasheena inay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimada cajiibka ah ee filim-qabashada ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhammaan waxyaabaha Mondo iyo MondoCon, madax ka noqo mondotees.com. Halkaa ka arag, dadyahow!
Frankenstein oo uu qoray Drew Struzan
Waxaa daabacay DL Screenprinting
Aroosadda Frankenstein ee Drew Struzan
Aroosada FrankensteinDrew StruzanFrankensteinMondoCon
Taxanaha TV-ga 'Nightbreed' ee Horumarinta, Clive Barker ayaa ku lug lahaa
Waa tan Sida Looga Hortago Waxyaabaha Shisheeyaha ah 2 Qaswadayaasha